20 Ecommerce Strategies Ekuwedzera Holiday Kutengesa | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 1, 2013 Chipiri, January 12, 2021 Douglas Karr
The folks at Volusion vari kuratidza a 20% kuwedzera mukutengesa kwezororo pamhepo kumabhizimusi madiki kusvika epakati epamhepo pamwaka uno!
Unoita sei kuti uwane zvakazara kubva panguva ino inokosha yezororo usingapisi bhajeti yako? Enda mumutambo uine chirongwa chakasimba uye utengese, tengesa, tengesa. Isu tave kuda kupinda yakanakisa nguva yegore yeecommerce. Volusion yakagadzira aya matipi ekuwedzera kubudirira kwako.
Gift Cards - mukurumbira ratidza makadhi echipo uye zvitupa zvezvipo pane peji rako rekumba uye ugadzire chikamu chavo - pamusoro pe2 / 3 yevatengi vakapa makadhi echipo gore rapfuura. Paunenge uchitumira chaiwo makadhi echipo kana zvitupa, sanganisira bhokisi rakashongedzwa iro rinogona kuputirwa uye kupihwa sechipo. Usatya kubhadharisa zvimwe izvi.
Kutakura Kweusiku - Chengetera kune vatengi-vemaminetsi ekupedzisira nekupa yehusiku yekutumira sarudzo kune vatengi kuti vagone kugamuchira yavo package nekukurumidza. Udza vatengi papeji rako rekutanga iro mhedzisiro zuva rekupedzisira ravanogona kuodha uye vachiri kugamuchira pasuru yavo munguva yezororo hombe. Tarisa nemupi wako wekutumira kuti uone kana paine zvitsva kana zvakaderedzwa mitengo zviripo. Kana zvirizvo, unogona kudzikisa mari kubhizinesi rako uye vatengi. (Rangarira kuti Zvita 18 zviri pamutemo Zuva Rekutumira Mahara - zvakanyanyisa. Funga kupa zvemahara kutumira pazuva rino kuti ugare uchikwikwidza iri padyo nemazororo.
Kubata Kwakakosha - Ipa kwaziso inodziya uye kusimudzira chero mikana inosimudzira pane yako yekutenda peji kana vatengi vaisa odha kana kunyorera kune yako tsamba tsamba. Sanganisira kadhi mukati mebhokisi rekutumira iwe paunotumira vatengi odha yavo. Kana iwe uine nguva, gadzira ruoko-rwakanyorwa nyora uine dhisikaundi mukati. Izvi zvinopa vatengi vako inodziya, fuzzy kunzwa uye kuvakurudzira kuti vadzokerezve zvimwe!
Yekutoro-muchitoro - Govera sarudzo ye-muchitoro kana uine nzvimbo yekutengesa. Izvi zvinokusevha iwe nemutengi wako mari pane zvekunze zvekutumira mari.
Kutumira Mahara Kutumira - Funga kupa kwemahara kutumira kwezvinhu zvakadzoserwa. Kuba izvi zvakatwasuka kunze kweZappos 'bhuku rekutamba, asi iri zano rinosimbisa kuvimba kwevatengi usati wabaya iyo Tenga izvozvi bhatani. Funga kuwedzera nguva yekudzoka mukati menguva yezororo kuti ubatsire kudzikisa misoro kana zororo rapera.
Gadzira kukurumidza - Isa kuverengera pamapeji ako ekumhara uye peji rekutanga iro rinoratidza kuti kwasara mazuva mangani kusvika pazororo rakakosha. Isa nzvimbo dzekutumira nguva dzakatarwa mune yako PPC ad zvinyorwa. Semuenzaniso, edza chimwe chinhu senge, Kutakura mahara kuburikidza (isa zuva)!
Shongedza - Wedzera imwe mhando yehoridhe-themed dhizaini kune yako logo kana kumhanya pasocial media mushandirapamwe uyo unobvunza vateveri vako nevateveri kuti vaendese zororo-themed kugadziriswazve kwekambani yako logo. Dzimwe pfungwa dzinosanganisira kuturika davi rehorly pamusoro peimwe yetsamba kana kushandura logo yako kuisa mwenje weKisimusi kana ngowani yaSanta. Google inozviita kazhinji pazviitiko zvakasiyana uye zvinowedzera kunakidza, kubata wega kune chako. Seta zuva seyakafa yekupedzisira kuti yako dhizaini dhizaini ibviswe kubva kune yako saiti, kuve nechokwadi chekuchengetedza yako mifananidzo uye kodhi yegore rinotevera. Iwe haudi kuve iwo akagumbuka muvakidzani uyo asingatore pasi magetsi avo.
Gadzirisa Tsananguro - Jazz kumusoro izvo zvirimo mune chako chigadzirwa tsananguro. Semuyenzaniso, Chipo chakanakira chero murume, kunyangwe avo vakaomesa kufadza, inokwezva zvakanyanya pane kunyora zvinyorwa zvehunyanzvi.
Gift Sets - Gadzira masumbu kana mabhasiketi echipo zvezvigadzirwa zvako uye ugadzire iwo chaiwo chikamu. Iwe unogona zvakare kuisa mabundles aya mune mamwe mapoka iwe watove nawo. Taura nezve kutengesa-kuyambuka!
Personalization - Bvumira vatengi vako kusanganisira yakasarudzika yechipo manotsi pakuraira. Unogona kuvaita kuti vaise izvi mumanotsi ehurongwa kana kuti ugadzire yakasarudzika munda pane rako rekutarisa peji kune iro rekuwedzera kubata. Govera kusarudzika kwekuwedzera-kune zvigadzirwa zvako, sekunyora kana kuveza, kana zvakakodzera.
Dzosera - Edza mushandirapamwe paunopa imwe muzana yezvekutengesa kune rubatsiro rwemuno, saKurume weDimes. Wese munhu anofarira kudzorera, saka ita kuti zvive nyore kuti vatengi vako vazviite.
Holiday Upsells - Funga kupa kukwidziridzwa uko vatengi vanogamuchira kadhi rechipo mukuwedzera kune imwe odha mutengo. Semuenzaniso, kana mutengi akashandisa $ 50, vanogashira $ 5 kadhi rechipo. Kana vakashandisa $ 100, $ 10 kadhi rechipo, nezvimwe. Iyi ndiyo nzira huru yekudzosera vatengi kuchitoro chako.
Chipo kuputira - Govera yemahara kana yakaderedzwa yemutengo chipo kuputira kubatsira vatengi mune piniki. Uye ita shuwa kuti iwe unoregedza kumusoro pabepa uye tepi!
Exclusive Discounts - Govera zvakasarudzika zvakaderedzwa zveNhema Chishanu (zuva mushure meKutenda Kwekuonga) uye Cyber ​​Muvhuro (Muvhuro wekutanga mushure meKutenda Kwekutenda) Aya ese mazuva maviri akakura ekutengesa online.
Gadzira - Edza mushandirapamwe paunoviga mufananidzo mudiki wechimwe chinhu, senge logo yako, yakadzika pane rimwe remapeji ako. Ipa chipo kune imwe huwandu hwevashandisi vanoiwana pakutanga. Izvi zvinokurudzira vanhu kufamba-famba kwese pane yako saiti uye nekuvaisa pachena kune zvakawanda nekuwedzera zvigadzirwa zvako.
Email Marketing - Tumira email kune yako ese vatengi base nekwaziso chaiyo iyo yekutenda ivo nekuda kwebhizinesi ravo. Izvi zvichavayeuchidza kubhadhara yako saiti kushanya kana uchitsvaga zvipo. Dhonza ako akasiya ngoro runyorwa vhiki rega uye tumira chiyeuchidzo kune vashandisi ava kuti vadzoke vapedzise kutenga kwavo. Simbisa katsamba kako kusaina kuti uwedzere huwandu hwevanosangana navo. Rangarira, dzokorora vatengi zvakachipa kwazvo kushandisa pane kuwana zvitsva. Mushure mevatengi vatenge kutenga kwavo kwekutanga, vatumire tsamba yakasarudzika inoratidza zvigadzirwa zvako zvese zvinozivikanwa uye inosanganisira mutero we "mutengi mutsva". Hazvina kumbonyanya kutanga kuti utange kuvaka kuvimbika kwevatengi.
Rarama Batsigiro - Kwidza rutsigiro rwako nekushandisa akawanda maawa pane ehupenyu kutaura uye nefoni kupindura chero mibvunzo. Wedzera hunhu hwako pahunhu hwese hwevatengi. Kana iwe uine nzvimbo yekufona, ita shuwa kuti unopindura foni nekwaziso yekunakidzwa kana kusanganisira yakatumirwa meseji pane yako mhenyu yekutaura module. Kunyangwe vasina kugutsikana vatengi havagone kuramba zvakanaka-vanoshuvira. Iva kujairana nefoni yako yekuraira sisitimu kana usati watove - vamwe vanhu vanosarudza kufona mukati nekuisa odha yavo mushure mekubvunza mibvunzo mishoma.
Kubhadhara Kushambadzira - Munguva yezororo, chinja yako PPC mishandirapamwe kuti ubatanidze zvine chekuita nezororo mazwi, senge zvipo or nezvipo. Kwidza kukwikwidza kwako PPC kubhidha. Vangangoita vatengi vari kutsvaga kushandisa zvishoma zvishoma kuti vawane yakanaka chigadzirwa, saka iwe unofanirwa kuve unodisa kushandisa zvishoma zvishoma nekusimudza yako yezuva nezuva shoma paPPC. Nekuenzanisa kushambadzira pakukwira, zvakanyorwa-zvakaringana, zvine hungwaru kushambadzira zvinyorwa zvinogona kubira kutengesa kubva kune vanokwikwidza Tsvaga yako PPC kushambadzira mameseji uye mazwi akakosha kunongedza vatengi vari kutsvaga zvipo zvipo kune vadikanwa. Semuenzaniso, shandisa izwi rakakosha senge "zvipo zvaBaba" nekopi kopi inosanganisira mazano anoti, "Tine zvipo zvehoridhe zvevarume vakaita seawachi, magurovhosi egorofu uye tayi teki dzishoma."
Tsvaga Injini - Dzorerazve yako mepu yako saiti nekukurumidza kupfuura gare gare nezvigadzirwa zvitsva uye zvikamu kuitira kuti injini dzekutsvaga dzikwanise kunongedza uye dzinozviisa mwaka wekutengesa usati watanga. Simbisa uye gadzirisa meta tsananguro pazvikamu uye zvigadzirwa zvinozivikanwa kuti ubatanidze akakosha mazwi akakosha ayo anobatsira peji renzvimbo yechikwata chako uye zvigadzirwa zvigadzirwa. Chinja yako yepamusoro peji remberi uye / kana kuteedzera kuratidza vatengi kuti ndiwe nzvimbo yakanaka yekutenga zvipo, uine chokwadi chekubatanidza akafanana mazwi akakosha sepakutanga kuti usarase pasi munzvimbo dzako dziripo.
Batanidza Masocial Media - Dzorerazve ako masocial media chiteshi, seTwitter neFacebook, kuti ave anosemesa uye anopiswa. Goverana zvako zvidzikiso uye simbisa zvakagadzirwa zvigadzirwa mazuva ese kuburikidza nevezvenhau - izvi zvinogadzira pfungwa yekukurumidzira uye zvinobatsira kuwedzera yako online kusvika. Edza mushandirapamwe wezvemagariro apo iwe unobvunza vatengi kuendesa mavhidhiyo, mifananidzo kana tsamba dzekuti nei vachifarira zvigadzirwa zvako uye bhizinesi. Ipa vanopindura dhisikaundi pane yavo chigadzirwa chesarudzo, uye wozoshandisa avo makotesheni uye mifananidzo pawebhusaiti yako. Rangarira, zvipupuriro zvakakura! Edza ongororo pane ako masocial media chiteshi, uchibvunza, "Kana iwe uchigona kuve nechinhu chimwe kubva (isa zita rako rechitoro), chingave chii?" Wobva watevera nekupa vakapindura kuderedzwa pane chigadzirwa chavakataura!
Dhawunorodha runyorwa rweVolusion rwese rwe 101 Ecommerce Matipi Ekusimudzira Holiday Kutengesa!
Cherechedza: Isu takasanganisira yedu yemubatanidzwa link yeVolusion mune zvese zvinyorwa. Volusion ndiyo inotungamira ecommerce mhinduro yemabhizinesi madiki kusvika epakati nepakati. Kubva 1999, zviuru zvemakambani vakashandisa Volusion kubudirira online, neavhareji mutengesi achitengesa makwikwi, 3: 1.
Tags: ecommerce emailecommerce email kushambadziraecommerce kukwirisaecommerce zvipo makadhiecommerce rarama rutsigiroecommerce kutengesaecommerce kutsvaga nziraecommerce zvemagariro midhiyaecommerce mazanochipo chemunhuzororo ecommerce mazanozororo ecommerce inosimudziranzira dzezororovolution
Nov 4, 2013 na3:02 AM